कैफेफिश नर्सरी कसरि - सही क्याटफिश खेती • Yurie बीएसएफ
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् - नि: शुल्क बीएसएफ मागेगा खेती प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुहोस्
हाम्रो बारेमा - अन्डरलेस म्याग्गोटको खेतीको संसारमा पहिलो
Maggot किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्
Maggot खेती FAQ
कैटलफ नर्सरी FAQs
कैफेफिश नर्सरी कसरि - क्याफफिश को सही खेती
Yurie | दिसम्बर 26, 2018 | कैटफिश कसरी खेती गर्ने
कसरी कैफेफिल्ड गर्ने
कृपया प्रश्न विज्ञान को साथ मदद र कैटफिश प्रजनन को बारे मा उत्तर दिनुहोस
यो साझेदारीमा छ (साझेदारी गरिएको)
WA, FB, G +, Pinterest, LinkedIn ट्विटर आदि जस्ता सामाजिक सञ्जालमा।
आशा छ कि यो ज्ञान साझेदारी को अन्त समय मा हाम्रो बचत हुन सक्छ। Aamiami
Maggot पशु फिड समाधान
तपाईंको सामग्री यहाँ जान्छ। यो पाठ ईनलाइन सम्पादन गर्नुहोस् वा मेट्नु सामग्री सेटिङहरू हटाउनुहोस्। तपाईं यस सामग्रीको प्रत्येक पक्ष मोड्युल डिजाइन सेटिङ्हरूमा पनि शैली शैली गर्न सक्नुहुनेछ र यो मोडलमा उन्नत सेटिङमा यो पाठमा अनुकूल CSS लाई पनि लागू गर्नुहोस्।
के यो वायु बिना हुन सक्छ?
ताल क्याटफिश घुमाउन को लागी वायु बिना यो हुन सक्छ, तर विकासको खतरा हो लार्वा बिरालो ढिलो हुन्छ।
र तालाबमा राखिएको माछाको बीउको संख्या धेरै हुन सक्दैन।
यद्यपि धेरैजसो बीउहरू ओक्सीजनमा कमी हुने र मृत्युको कारण हुन सक्छ।
यो बुझ्न सकिन्छ कि ह्याचरी पूलमा वायुको उद्देश्य तालाबमा ओक्सीजनको मात्रा बढाउनु हो, ताकि हामी तालाबन्दीमा ठोस क्यालिफ बीउको भण्डार बढाउन सक्छौं।
लार्वा पूलहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने?
कैथेफ लर्वा पूल माथि पाण्डेलमा दिएर। यो सूर्य पर्दाको रूपमा यो पैदल सीधा सीधा तालाबमा जान्छ। त्यसो कि म्यासको विकास कम गर्न सकिन्छ।
कालो लडाइँ स्कूपको साथ मेस सफा गर्नुहोस्।
हप्ताको नमक, पी.पी. वा धातुिन ब्लूमा कम्तीमा एक पटकको आवश्यकता पर्दछ। महत्वपूर्ण दिनचर्याको सानो भाग मात्र।
प्रति वर्ग मीटर आदर्श मोजा घनत्व?
प्रति वर्ग मीटर घनत्व भण्डारणको लागि पूल PxLxT गुणा गुणा गणना गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, केडीईफिक्स बीउ तालाहरू 280cm एक्स 300cm X 25 सीसी औसत पानीको स्तर 10-15C को साथ र पानी परिसंचरणसँग, पूलले 50.000 बिरुवा सम्म समायोजन गर्न सक्छ जब सम्म यो 2-3 को आकार हुन सक्छ।
600cmx200x65cm को आकार को लागि ठोस घनत्व के हो?
प्रारम्भ गर्न सिक्न 500 - 1.000 पूरै बीच हुन सक्छ।
कफी लामो कफी पाउडर पाउडर छर्र्स वा फेंगली गर्न सकिन्छ?
चार दिनको उमेरमा सुत्ने कैफफिश बीउहरू पाउडर छर्रौं तर मात्र सानो मात्रा मा जान सकिन्छ।
कार्बोहाइड्रेटबाट ऊर्जा बढ्नको लागि कैफफिश लार्वामा फीड छर्रों पाउडर पाउनुको उद्देश्य यसैले कि क्याफ्रि लार्वाले स्वस्थ र बलियो हुन्छ।
तर यो अझै पनि प्रोटीन को आपूर्ति को रूप मा रेशम कीड़े दी जानी चाहिए, को लागि रेशम कीड़े प्राप्त गर्न मा कठिनाइ हुनेहरुको लागि संग बदला जा सकता Maggot पास्ता.
Maggot पेस्ट Maggot बाट बनाइयो वा maggots वा लार्वा बाट कालो उडान वा कालो सैनिक उडान.
विधि सजिलो छ, रेशम कीड़ेबाट पेस्ट बनाउने जस्ता।
त्यो मगग म्याग्गोट को रूप मा अन्य सामाग्री संग एक ब्लेंडर मा मिश्रित कच्चे माल हो।
यसलाई प्रयोग गर्नु अघि, यसलाई 24 घण्टाको लागि रेफ्रिजरेटरमा राख्नुहोस् ताकि प्राकृतिक किण्वन प्रक्रिया यसको पोषण सामग्री अधिकतम गर्नको लागि अधिक भन्दा अधिकतम हुन सक्छ।
थप पूरा मिश्रणको लागि, तपाईंले वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ www.YurieBSF.com
कफीफ लार्वालाई कतिवटा ग्राम पाउडर छर्र्स वा फेंगली भनिन्छ?
Pengli पाउडर छर्रहरु लाई एक ग्राम को रूप मा दिइएको छ। प्रशासन को तरीका सीधा कैफिश लार्वा मा फैल सक्छ।
तपाईं माछा लार्वालाई कसरी खाना खाउनुहुन्छ, के तपाईंलाई पहिले bibis मा जाने को आवश्यकता छ?
फीड पहिला "बीउ" हुनु पर्छ, जसको उद्देश्यले गर्दा त्यसो गर्दा कि खानाले पेटको पेट बाहिरको विस्तार गर्दछ, ताकि माछा छिटो भरिएको छ र फिसोबाट बच्न।
निम्न किसानहरू निम्न प्रकार छन्:
फीडमा साना देखि सानो पानी स्प्रे गर्नुहोस्, निश्चित गर्न नमिल्ने बनाउनुहोस्।
मिश्रित नभएसम्म हलचल।
15 - 30 मिनेटको लागि ब्याड गरिएको खाना बिर्सनु नपर्दा फिड महसुस नगरे पछि यसले ज्योति वा निविदा पाउँछ।
यसबाहेक, क्याफफरी लार्वा भण्डार गर्न तयार छन्।
फिडलाई समान रूपमा फैल्नुहोस्। राशि सानो देखि सानो छ।
कफीफ लार्वा भरिएको नभएसम्म यो दिनुहोस्, बन्द गर्नुहोस् यदि लार्वा अब र खाना खाने उत्सुक हुने छैन देखा पर्दैन।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि लार्वा द्वारा खाईएको धेरै फिड छैन। धेरै पाउन्डको तलमा बसोबास गर्ने जुन क्यामफिशको बीउको लागि अमोनिया वा जहर हुनेछ।
तपाईं कसरी राम्रो रेशम कीरा प्रदान गर्नुहुन्छ?
अधिकतम नतीजाको लागि, रेशमवाटहरू दिनुपर्ने निम्न चरणहरू पछ्याउनु पर्छ:
पहिलो चरण, रेशम कीराहरू पहिला घुमाइरहन्छन्, ताकि गहिरो कम से कम एक वा दुई दिन बर्बाद हुन्छ।
अर्को, धोका गर्नुअघि, पानी सफा नगर्नुसम्म यो पूर्णतया सफा छ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कुनै पनि क्यासुर वाहकहरू र तालाबको तलमा रेशम कीड़ेको निर्माण गर्ने पानीको गुणस्तर घटाउनको कारण हुन्छ।
बारिशको मौसममा कति चोटि खाना खान्छ?
जब बरसातको सिजन फिडले वर्षा वा एक या दुई घण्टामै पछाडि राख्छ, त्यसो गर्दा चारा पानीको साथ मिल्दैन।
यदि वर्षाको तीव्रता लामो छ भने, दिनहुँ खुवाउन दुई पटक हुन्छ, यो खाना खाएको समय र कैफिस द्वारा अझ राम्रो अवशोषित गराउनु हो।
कहिलेकाहीँ वर्षाको समय वा बसिएको वर्षा भएपछि खाना खाई नदिनुहोस्, यदि वर्षाहरू बिरामीको जोखिममा हुन सक्दछन् भने कैफ फिश हुन्छ।
किनकि खाना खाएको छ फिर्ता उल्का गरिनेछ र पूल पानीको भूराला बनाउनेछ।
अर्को खराब नतिजा यो हो कि क्यू जस्तै अवस्थाहरू गुणा बढ्नेछ र माछाको दुखाइको कारण हुन्छ।
क्यास हटाउने पछि सबैभन्दा राम्रो फिड के हो?
फेंगली शून्य दिनुहोस्।
विधि सानो देखि सानो छ।
कैसीट प्रशासन अझै लगभग एक ग्राममा फैलिएको छ।
वा सबै भन्दा राम्रो दिग्गज पास्ता।
बलियो माछाको बीज पछि प्रीमियम पीएससी प्रदान गर्न सकिन्छ। वा फिड लागत बचत गर्न चुम्बन छर्रों उच्च प्रोटीन।
पूर्ण पोषण र उच्च प्रोटीन सहित, म्याग्गेट छर्रों बनाउन को लागी लागत धेरै सस्तो छ, केवल 3.000 / किग वरपर।
यो ठूलो लाभ कैथेफ को रहस्य हो, जुन एक सस्ता तर अत्यधिक पोषक जादुई गोली फीड हो।
क्याटफिश छिटो बनाउन कुन वैकल्पिक फिड दिइएको छ?
Maggot BSF, snails, snails आदि।
सजिलो र सस्तो तरिकाले म्यागगेट बनाउन, कसरी Google मा खोल्न को लागी, www.YurieBSF.com
तपाइँ व्हाइट स्कोउट फैलाउने क्रममा 1-2 क्याटफिश बीउहरू कसरी रोक्नुहुन्छ?
सेतो स्नाउन्ट रोगको कारण यो तालिम पूर्ण सूरजमुखी देखि उजागर भएको छ र पानी धेरै मोटो हुन्छ।
प्रारम्भिक विशेषताहरू रेड्रिड पानी र त्यसपछि सेतो स्थानहरू छन्, अर्थात् मशरूम।
यो समस्याबाट बच्न, माथि पूललाई ​​छत दिइएको छ, वा यो केला पत्तिहरू प्रदान गर्दछ जसलाई छतको रूपमा कार्य गर्दछ।
पितिलको पछाडि अर्को ढोकाको कारण के हो?
पतिल फिन पछि अर्को ढोका अमोनिया बन्न बाँकी खानाको नकारात्मक प्रभावको कारण हो।
यसको अलावा यो पूल को तल मा मकस को मात्रा को कारण पनि हुन्छ
समाधान को लागि फीड को मात्रा को व्यवस्था गर्न को लागी छ कि धेरै अधिक छैन र माछा लार्वा को लागि जहर स्रोत बन जान्छ।
नियमित अमेरीका हटाउन पानी परिसंचरण प्रदान गरेर नियमित रूपमा पूल सफा गर्नुहोस्।
त्यहाँ कैफफिश टाउकोमा लम्पहरू किन छन्?
एक कारण हो किनभने पानी धेरै बादल हुन्छ।
यसलाई हटाउन, पानी बदल्नुहोस्, र प्रोबायोटिक्सहरू थप्नुहोस्।
प्रोबायोटिक्स यदि रोकथाम को लागि नियमित रूप मा पपीया पातहरु लाई दिन सकिन्छ।
अथवा नोनी पाटा निकाटबाट प्रोबायोटिक्स प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईं वेबसाइटमा ट्यूटोरियल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ www.YurieBSF.com
के पानीले पानीको सतहमा फ्याट गर्ने कारणले गर्दा?
अस्थायी माछाको कारणले गर्दा धेरै भन्दा खुवा दिइएको छ, वा ठीको मौसमको कारण।
अस्थायी माछासँग कसरी व्यवहार गर्ने?
पहिलो चरण मेटालिन ब्लू दिन छ, त्यसपछि तीन घण्टापछि पानीलाई 50% को रूपमा धेरै बदल्नुहोस्।
दोस्रो चरण, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि अर्को फीड घटाइएको छ, र पहिले माछा दिनुभन्दा पहिला पीडित।
तपाईं को लागि को लागि घर को टाइल अन्तर्गत तालाब को स्थिति को लागी।
निश्चित गर्नुहोस् कि वर्षा पानी जुन टाइल मार्फत पसेको हुन्छ तुरुन्तै तालाबमा पर्दैन, किनकि टाइलबाट कालो माई जहर हुन्छ।
के पेटमा नजिकको पेटमा रातो बम्पको कारणले?
रोगको मुख्य कारण अत्यधिक फिडिंगको ढाँचा हो।
अत्यधिक फिडले माछा मच्छर संग मिश्रित पूल को तल मा बस्न र बीउ को बीउ बन्न को लागि धेरै अवशिष्ट कारण हुनेछ।
समाधान तालाबको तलल्लो च्यानल मार्फत खारेज गर्नु हो। र खाना को भाग सेट बिखराएको छैन वा धेरै बिखन।
Curcuma थप गर्न राम्रो छैन?
धेरै राम्रो, अदरक वा अदरक वा लसुन वा बेल्ट पत्तिको रूपमा मसाले थप्दा जो उबलीएको हुन्छ माछाको कुटीर बढ्न मद्दत गर्दछ।
यी प्राकृतिक जडीबुटीहरू प्राकृतिक प्रोबायोटिक्सको रूपमा पनि राम्रो हुन्छन्।
तपाईं कसरी खडा क्याटफिशसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ?
यहाँ कैथेफिश खडा गर्न केही तरिकाहरू छन्:
खाना कम गर्नुहोस्।
तालाब तल पानीको निषेध।
लटका क्याटफिशलाई अलग गर्नुहोस्
3-5 सेतो तल लौहरू पुश गर्नुहोस् र क्याफफिन्ड तालमा छिर्नुहोस्
क्याथेफिल तालाबमा माछा नमक छिर्नुहोस्।
नीलो औषधीले क्याथेफ तालाबमा छिर्नुहोस्।
माथिको विधि पनि कैफफिश मकस छाया हटाउन उपाय हो, पानी सजिलै उज्यालो वा मुस्कुराउँदछ।
द्वारा क्रमबद्ध गर्नुहोस्
कैफेफिश बीउहरू हेरिन्छ कति दिन पछि क्रमबद्ध छन्?
15 दिन पछि पहिलो क्रम गर्नुहोस्।
तर के लिइएको छ पर्याप्त बन्डोलान वा केवल plentongan।
पाँच दिन पछि, सम्पूर्ण क्रमबद्ध गर्नुहोस्।
एक दिन 15 उमेर अन्तर्गत कुल माछालाई क्रमबद्ध नगर्नुहोस्, यो माछाको मृत्युको लागि खतरा हुन सक्छ।
सुझावहरू र ट्रिक्सहरू
कैफफिस किन्नरीको लागि सही पानी कति उच्च छ?
पानीको स्तर 20cm भन्दा अधिक हुनु हुँदैन।
केशफको लागि रातो पानी राम्रो छ?
जबसम्म सामान्य माछा विकास समस्या छैन।
यदि के हुन्छ भने राम्रो हुन्छ, त्यसपछि नियमित प्रोबायोटिक्ससँग उपचार गर्नुहोस्।
तपाईले कसरी 3-4 क्यालीफिश बीउ सजिलै मर्न सक्नुहुन्न?
तपाईं यो बनाउनुहुन्छ कि पूल सूरजमुखीमा अवस्थित छ, र पूलको ¼ भाग उदाहरणका लागि केला पातहरू ढाक्न दिनुहोस्।
यदि पूल को बिना छत को बिना र पूल को दिन को सूर्य को प्रकाश देखि उजागर गरे, तब 30 - 50% को रूप मा पानी को परिवर्तन गर्छन।
कसरी बीउ बढ्न सक्छ?
सबै भन्दा राम्रो तरिका पोषक बीउहरू, पोषण र उच्च प्रोटीन पूरा गर्न को लागी छ।
तर यदि तपाईंले स्टोरमा यी मापदण्डहरूसँग फिड किन्नुभयो भने, तपाइँ लागत खाउन सक्नुहुन्न।
त्यसोभए वैकल्पिक हुनुपर्छ कि तपाईको आफ्नै फिड बनाउन को लागी सबै भन्दा सस्तो लागतमा क्याफ्रिर् लार्वा को आवश्यकताहरु फिट हुन्छ।
अर्थात् मगग वा जादुई वा लार्वाको रूपमा कालो सैनिक उडान।
यो विधि हो जब माछा लार्वा चार दिन पुरानो छ, म्याग्गोट कटाई वा मिश्रित हुन्छ र कैफिश लार्वालाई दिइन्छ।
तुरुन्तै दिनुहोस् कि सबै माछा लार्वा उनीहरूको सम्बन्धित अंशहरू पाउछन्।
काकाबन्दी लिनुहोस् ताकि मगग पेस्ट फीड स्टिक र बसाइदैन।
तपाईंले कति पटक पानीको बदल्नु पर्छ?
पानीको प्रतिस्थापन पानीको अवस्थाहरूमा आधारित हुनुपर्छ। किनकि प्रत्येक क्षेत्रमा पानीको गुणस्तर फरक छ।
पानीको सुविधाले पछाडी हान्नको लागी पानीको पानी तुरुन्तै बदलिनु पर्दछ।
वा जब माछाले गतिलाई हेर्न शुरु गरेको छ।
पानी प्रतिस्थापन सबै एकैचोटि होइन, तर केवल आधा अधिकतम र त्यसपछि अर्को दिन पछि माछा माछा चर्को लागी हेरौं।
तपाईं कैफफिशसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, जो विकास कल्याणहरू हुन्?
कुनेटेट कैफफिशको विकासको धेरै कारणहरू, सामान्यतया किनभने खाना खानको ढाँचा राम्रो छैन र प्रदान गरिएको फिडको गुण न्यूनतम गुणको पनि हो।
धेरै क्षेत्रहरूमा फिड लागतको आकारको समस्या हुन्छ।
यसैले बिरालो किसानहरू आफ्नै खाना बनाउन सृजनाशील हुनुपर्छ।
एक समाधान मगगबाट वैकल्पिक फिड सिर्जना गर्न हो।
मगगोटबाट वैकल्पिक फीड कसरी बनाउने भनेर विवरणहरू बीएसएफएफ युरी वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ।
Google type yurie bsf वा टाइप www.yuriebsf.com मा
कसरी पानीको पानी हरियो बनाउनुहुन्छ?
मनमोहक यो हरी पानीको रंग मनपर्दो छैन, तर ताला पानीको तयार पारेर धेरै साना जीवित जनावरहरू छन्।
किनभने जीवित साना जनावरहरूको उपस्थितिले बताउँछ कि पानी हाम्रो लागि बीउ फैलाउन राम्रो छ।
मच्छर लार्वा, चिडियाघर प्लानटन र अरूको रूपमा सानो जनावरहरू माछा पानी माछा माछा र माछाको लागि थप खाना थपिन्छन्।
यहाँ पानीको पानी हरियो छिटो छिटो बाटो हो:
स्वच्छ पानीको इनपुट, स्वच्छ पानी पानी वा जमीनको पानीबाट आउन सक्छ।
यदि कुनै राम्रो पानी छैन र तपाईं पाम पानीबाट प्राप्त पानी प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, यसलाई कम्तीमा तीन दिनसम्म लागू गर्न सकिन्छ ताकि लोहे र नकारात्मक कणहरू कन्टेनरको तल निस्कन्छ।
अर्को चरण उर्वरक को एक बोरा सम्मिलित गरेर यसलाई एक वा दुई हप्ताको लागि छोडेर उर्जी गर्दै छ।
प्रोबायोटिक प्रशासन पनि राम्रो छ र तालाबको पानीलाई हरीमा छिटो मद्दत गर्दछ।
एक वा दुई हप्ता पछि पानी हरियो मार्नेछ र त्यहाँ धेरै मच्छर लार्वा र अन्य साना जनावर हुनेछ।
कैसे फोमली पूल संग सम्झौता?
फोमिंग पूल को कारणहरु मध्ये एक तालाब मा माछा घनत्व धेरै अधिक छ।
यदि यो हुन्छ भने, विभिन्न तालाबहरूमा माछा विभाजन वा विभाजन गरेर थिइन।
धेरै अन्डाहरू किन प्रायः छन्, तर धेरै मर्छन्?
मृतकको संख्या हुन सक्छ किनभने आमाको गुण तयार छैन।
यसैले, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कैफफिश ब्रूड स्टड वास्तवमा तयार हुनुपर्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि क्याफफिड ब्रोडस्टक हेरचाहलाई उच्च प्रोटीन फिड र पूर्ण पोषण र विशेष ध्यान दिनु पर्यो गर्नु अघि दिनु पर्छ
तपाईलाई छिटो कैफफिश लार्वा कसरी बनाउनुहुन्छ?
उच्च पोषणशील फिड जस्तै बीएसएफ मगगट दिनुहोस्।
देवीलाई पहिले दिउँसो खाना दिनुहोस् र लार्वाको लागि प्राकृतिक प्रोबायोटिक्सको रूपमा सानो टुक्रा मा काटेर अदरक वा पपीया पत्तिहरू दिनुहोस।
अन्य Maggot फर्महरूको लागि 99 स्थान जाँच गर्नुहोस्!
अझै प्रश्नहरू छन्?
Yurie BSF लाई सम्पर्क गर्नुहोस्
टेलिफोन / WA: 0812-2105-2808
कुनै सम्बन्धित पोस्टहरू छैनन्!
प्रचलित विषय 2019
10 Yurie BSF सफलता कार्यक्रम
मागेगाट खेती गाइड
99 बीएसएफ मागगट फार्म को स्थान
Maggot BSF र कसरि मार्केटिंग माईग्रेट किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्
मित्रहरूको लागि राहत निधि
मगग खेती सहायता कोष
बिना म्याग म्यागगट समुदायमा सामेल हुनुहोस्
इ-मेल ठेगाना *
बीएसएफ मिडियाको मगगोट ब्रेनको खेती
कसरी नयाँ 2019 बीएसएफ माग्गोट पशुधन
कैफेफिड फिडका लागि फ्रान्सेन्स चावल ब्रेन / चावल ब्रेन कसरी
माछा फिडको लागि पाम तेल केकको उपयोग
सांगकोरगजी 2019 क्याटफिश कसरी गर्ने?
जग्गा खेती मगगको खेती यति मुस्कुराउँदैन maggots अफ्रिकी क्याटफिश मगगको कालो सैनिक मक्खी मैगगोट बीएसएफ खेती विधि मगगको खेती बिना गन्ध मगगोट जल मिडियाको खेती ब्रेक संग मागेगा को खेती एक्सएनमक्सको साथ मगग खेती
Yurie बीएसएफ - विश्व को पहिलो Odorless Maggot खेती
निःशुल्क Maggot खेती प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुहोस्
साइट मानचित्र - साइटमैप Yurie BSF
© 2000-2018 ताजा पुस्तकहरू | कल टोल फ्री: 0812 - 2105 - 2808
गुगल + https: //plus.google.com/+YurieBSF